आज चर्चित पत्रकार रवी लामिछानेको जन्मदिन, यस्तो छ रविको इतिहाँस !
पोखरा २७ भदौ- आज चर्चित पत्रकार रवी लामिछानेको जन्मदिन परेको छ । उनि ज बाट ४५ बर्षमा लागेका छन् । लामिछानेको जन्म सेप्टेम्बर, १९७४ मा भक्तपुरमा भएको हो ।
सन् २०१३ को अप्रिलमा नेपालको न्युज २४ टेलिभिजनमा निरन्तर ६० घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर उनले विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् ।
उनि नेपालमा पत्रकारिता गर्दागर्दै अमेरिका पलायन भएका पत्रकार हुन् । सन् २०१३ को अप्रिलमा नेपालको न्युज २४ टेलिभिजनमा निरन्तर ६० घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर उनले विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् । रवि लामिछाने अहिले न्युज २४ टेलिभिजनबाट सिधाकुरा जनतासंग कार्यक्रम चलाउछन्।
बि.सं. २०७६ भाद्र महिनामा उनका सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आ त्मह त्या पश्चात्, उनले रेकर्ड गरेको भिडियोको आधारमा रवि लामिछानेलाई प्रहरीले प*क्राउगरी अदालतमा पेश गरेको थियो। यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भन्दै चितवन जिल्ला अदालतले आगामी दिनमा मु*द्दाको बारेमा अन्तर्वार्ता नगर्ने शर्तमा पाँच लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । अमेरिकामा रहंदा आफ्नी पुर्व पत्नी इशासंग विवाद भएपछि नेपाल आएर डिभोर्स गरेका थिए ।
डिभोर्स पछि उनले निकिता पौडेलसंग बिवाह गरेका छन् । हाल अमेरिकामा उनका दुइ छोरी पनि रहेका छन् । रविलगायत तीनैजनाको अनुसन्धानमा परेको रिटको सुनुवाइ २ असोजमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आ त्मह त्या दुरुत्साहनका अभियुक्त रवि लामिछाने र युवराज कँडेल तथा अस्मिता कार्कीलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ सरेको छ।
उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले रवि, युवराज र अस्मितालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै दर्ता भएको निवेदनमाथि अब आगामी असोज २ गते विहिबार सुनुवाई हुने भएको हो। रवि पाँच लाख, युवराज तीन लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए भने अस्मिता सामान्य तारेखमा छुटेकी थिइन्। तीनै जनालाई थुनामा राख्न माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले गत सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।
साथै टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले निकिता पौडेलसँग तेस्रो बिह्से ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेपछि उनकी पूर्वपत्नी ईशा लामिछानेले झनै चर्चामा आइन। पूर्वपतिले नयाँ घर बसाउँदा आफूलाई खुशी लागेको उनले बताइन् । ‘उहाँले अर्को बिहेका लागि नै मलाई डिभोर्स दिनुभएको थियो, त्यसैले म आश्चर्यमा परेकी छैन,’ अमेरिकाबाट ईशाले भनिन्, ‘मेरो र दुई छोरीहरुको तर्फबाट शुभकामना लेखिदिनुहोला भन्ने समाचारले कुनै बेला सामाजिक संजाल तातेको थियो ।’
विगतका तीन सम्बन्धहरु जस्तो यो चौथो सम्बन्ध असफल नहोस भन्ने कामना पनि ईशाले गरेकी थिइन् । ‘म कानूनीरुपमा रवीजीसँग अलग भए पनि सँधै उहाँको खुशी र प्रगति हेर्न चाहन्छु । मेरा छोरीहरुका बुवाको रुपमा उहाँसँग मेरो साइनो सदा जिवित रहनेछ । खाली यति भन्न चाहन्छु कि भविष्यमा नयाँ पत्नीलाई मलाई जस्तो तिरस्कार नगर्नुहोला,’ ईशाले थपिन् ।
ईशा अहिले दुई छोरीहरुसहित अमेरिकामा छिन् । केहि समय अघिईशा र रविको सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । श्रीमतीसँग डिभोर्सलगत्तै रवि लामिछानेले अर्को बिहे गरेका हुन् । रवि र निकिता केही महिनादेखि प्रेममा थिए तर उनले त्यस्तो सम्बन्ध केहि नभएकोभन्दै आफ्ना फ्यानहरुलाई ढाँट्दै आएका थिए ।
निकिता पनि डिभोर्सी हुन् । बिवाह पुर्र रवि र निकिता चाबहिलमा एउटै अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्थे । उनीहरु लिभिङ टुगेदरमा रहेको कतिपयको आशंका थियो । तर, उनीहरुले आफूहरु फरक फरक फ्ल्याटमा बस्ने गरेको दावी गरेका थिए । निकितासँग बिहेसँगै रविको काँधमा तीन परिवारको जिम्मेवारी आएको छ ।
उनले पूर्वपत्नी ईशा र उनीतर्फका दुई छोरीहरुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने गरी सम्झौता गरेका छन् । यस्तै उनको एक विदेशी महिलासँग सम्वन्ध भएर एक छोरा छ । ती महिलाले छोरालाई दिदीको जिम्मा लगाएर अर्कै पुरुषसँग बिहे गरेकी छन् । २ पटक पटकपटक बिहे गरेर डिभोर्स गरेका रबीले अहिले तेस्रो बिहे गरेपछि सामाजिक सञ्जाल कतै आलोचना त् कतै बधाईको ओइरो लागेको छ ।खासमा इशाले पहिले नै रविले तेस्रो बिहे गर्न लागेको खुलासा गर्दै यसो भनेकी थिइन ।
रविको बिहे पछि पुर्वपत्नी इशाले मिडियामा कुरा गर्दै रवि र आफ्नो बारेमा खण्डन गरेकी थिइन । “आफ्नो निजी जीवनका कुराहरु कुनै दिन सार्वजनिक चर्चाका विषय बन्लान् भन्ने मैले कल्पना नै गरेकी थिइनँ । मैले मिडियामा आउन चाहेकी पनि थिइनँ । म त डिभोर्सपछि चुपचाप अमेरिका फर्किएकी हुँ उनले भनेकी छन् ।
हाम्रो प्रेम विवाह हो । तर, विवाहपछि मैले उहाँबाट आफूले चाहेको/कल्पेको प्रेमको अनुभूति गर्न सकिनँ । वैवाहिक सम्वन्धको महत्व श्रीमानभन्दा श्रीमतीलाई बेसी हुन्छ । वैवाहिक सम्वन्ध तोडिँदा पुरुषले त सजिलै अर्को घर बसाउन सक्ला, तर महिलाले अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ । उसलाई समाजले राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन । छोराछोरीहरुलाई त्यसको असर पर्छ । त्यसैले रविजीबाट वर्षौंंसम्म तिरस्कार झेलेर पनि म हाम्रो सम्वन्धको संरक्षणमा नै दत्तचित्त रहेँ ।
म सुरुदेखिको कुरा गर्छु । झर्को नमानिदिनुहोला । ०५१ साल मंसिर ११ गते हाम्रो बिहे भएको हो । मेरो घरमा आएर सामान्य सिन्दुरपोते गर्नुभएको थियो । एउटै स्कुलबाट एसएलसी पास गरेलगत्तै बिहे गर्दा दुबै टीनएजर थियौं । बिहे गर्दा उहाँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । पारिवारिक दायित्व आएपछि काम गर्न थाल्नुभयो । उहाँलाई पत्रकारितामा रुची थियो । एफएममा काम गर्न थालेपछि लोकपि्रयता पनि कमाउनुभयो । त्यसपछि टेलिभिजनमा हास्य कार्यक्रम पनि चलाउनुभयो ।
बिहेलगत्तै म गर्भवती भएँ । १९ वर्षमै जेठी छोरी जन्माएँ । त्यसपछि मेरो पढाइ अघि बढ्न सकेन । रविजी पनि पढाइ छोडेर करिअरमै फोकस हुनुभयो । बिहेको केही वर्षपछि रविजीको दाइहरुसँग खटपट पर्‍यो । एकजना दाइ पनि सञ्चारकर्मी भएकाले उछिनपाछिन भयो होला । अरु कारण भने जान्दिनँ । मलाई भने दाइहरुले केही नराम्रो गर्नुभएको होइन ।
रविजी आफ्नो प्रोफेसनप्रति पहिलेदेखि नै डेडिकेटेड हुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा काम, दोस्रोमा साथीभाइ र तेस्रोमा मात्रै परिवार आउँथ्यो । हरेक श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानसित बढीभन्दा बढी समय बिताउन चाहन्छे । श्रीमानले घरको काम र बच्चाको हेरचाहमा साथ देओस् भन्ने चाहन्छे । म पनि चाहन्थेँ ।
तर, उहाँ परिवारका लागि समय निकाल्न सक्नुहुन्थेन । फुर्सदको समयमा पनि परिवारसँगभन्दा साथीभाइसँग रमाउनुहुन्थ्यो । चाडबाडको समयमा परिवारसँग कमै बस्नुहुन्थ्यो । दशैंमा म र छोरीलाई टीका टाँसिदिएर निस्किहाल्नुहुन्थ्यो । यस्तै खुद्रामसिना कारणले मेरो उदासी बढिरहेको थियो ।
उहाँ हामी आमाछोरीसँग विदा भएर अमेरिका जानुभयो । जाने बेला भन्नुभएको थियो कि उता सेटल हुन सकियो भने तिमीहरुलाई पनि लैजान्छु । म खुशी नै थिएँ । रविजी अमेरिका गएको भोलिपल्ट हाम्रो ल्यान्डलाइन फोनको घन्टी बज्यो । एक अपरिचित केटीले फोन गरेकी थिइन् । ‘ओई, तेरो पोई कहाँ गएको हो भन् ?’ फोन उठाउनासाथ उताबाट चर्को स्वरमा यस्तो आवाज आयो । म झसंग भएँ ।
उस्तै कडा स्वरमा जवाफ दिएँ, ‘जहाँ गए पनि किन चाहियो तँलाई ? को होस तँ ?’ उनले भनिन्, ‘तेरो पोईले मलाई धोका दिएर भाग्यो । उसले मबाट दुईटा सन्तान जन्माएको छ । कहाँ गएको हो ? भनिनस् भने तिमीहरु आमाछोरीलाई कि डन्याप गराइदिन्छु ।’
मैले उनको कुरा पत्याइनँ । झ्याप्प फोन राखेँ । तर, उनले बारम्बार फोन गरेर टर्चर दिन थालिन् । ध म्क्याउन थालिन् । त्यसपछि मैले आफ्नो माइतीका दाजूहरु र देवर (रविजीको कान्छाबुबाका छोरा) लाई यो कुरा सुनाएँ । उहाँहरुले ल्यान्डलाइनमा कलर आइडी राखौं भन्नुभयो । टेलिकममा केही पैसा तिरेर कलर आइडी राखियो । दाइ र देवरले त्यो नम्बरमा फोन गरेर ती केटीको घर र अफिस पत्ता लगाउनुभएछ । म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्दिरहिछन् ।
त्यसपछि प्रहरीमा जाने कुरा भयो । मैले रविजीलाई फोन गरेर भनेँ कि यस्तो-यस्तो फोन आइरहेको छ । हामी प्रहरीमा जाने विचार गरिरहेका छौं । उहाँले ती केटीको विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताउनुभयो र प्रहरीमा जाँदा हुन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि दाइ र देवरले ती केटीलाई अफिसमा गएर भेट्नुभयो । अनि, चेतावनी दिनुभयो कि अब आइन्दा फोन गरिस् भने तेरो घरमा प्रहरी आउँछ । त्यो केटी डराइछ । त्यसपछि उसको फोन आएन । यो घटना यत्तिकै सामसुम भयो ।
त्यतिबेला मैले सोचेकी थिएँ कि ती केटी रविजीको कुनै फ्यान होलिन् । तर, अहिले सोच्दा उनीसँग रविजीको केही थियो कि भन्ने पनि शंका लाग्छ । आखिर यत्तिकै त कसैले अर्काको श्रीमतीलाई ध म्क्याएर फोन गर्दैन नि । जे होस् त्यो समस्या सल्टिएपछि यसलाई मैले त्यतिबेला इस्यू बनाइनँ ।
अमेरिका गएको ६ महिनामा भिसा प्रक्रियाका लागि उहाँ नेपाल फर्किनुभयो । मलाई फेरि गर्भवती बनाएर उहाँ फेरि अमेरिका जानुभयो । अब मेरा काँधमा दुई छोरीको जिम्मेवारी आइपर्‍यो । छोरी जन्माउने क्रममा सासूआमाले सहयोग गर्नुभयो । न्वारन सकेपछि माइत गएँ । माइतीको सहयोगले गर्दा छोरीहरु हुर्काउन केही सजिलो भयो । रविजी अमेरिका फर्किएको केही समयपछि मलाई अर्को टर्चर सुरु भयो ।
तर, उहाँहरुका थरीथरी फोटोहरु बाहिर आउन थालेपछि मित्रता मात्र होला भनेर पत्याउन गाह्रो हुँदै गयो । एकपटक त मैले रविजीलाई फोन गर्दा तिनै महिलाले उठाउनुभयो । त्यहीबेलादेखि हो मैले डिप्रेसनको औषधि खानुपरेको । जसोतसो आफूलाई सम्हाल्दै दुई छोरीलाई लालन-पालन र शिक्षादीक्षा दिलाउँदै गएँ । घरमा एकजना बहिनीलाई काम सघाउन राखेकी थिएँ ।
एक दिन हाम्रो ठूलै झगडा भयो । र, उहाँ घरै छोडेर हिँड्नुभयो । त्यतिबेला उहाँको बाहिर एक विदेशी केटीसँग चक्कर चलिरहेको रहेछ । सायद त्यही भएर मप्रति वितृष्णा पैदा भएको रहेछ । उहाँ घर छोडेर त्यही केटीसँग लिभिङ टुगेदरमा बस्न थाल्नुभएछ ।
उनले को केटी हो त्यो भनेर भन्न मानिनन् । मलाई उनको कुरा पत्याउन गाह्रो पर्‍यो । मलाई आमाले त पहिलेदेखि नै भन्नुहुन्थ्यो कि लोग्नेमान्छे त्यत्तिकै बाहिर एक्लै बस्दैन, होस गर भनेर । मैले आफ्नो श्रीमान त्यतिसम्म त गिर्नुहुन्न होला भन्ने सोचेकी थिएँ । तर, नसोचेको भयो ।
उनीसित मेरो रविजीको अफिसको पार्टीमा भेटघाट र चिनजान भएको थियो । फेसबुकमा पनि साथी थिइन् र बेलाबखत कुरा पनि हुन्थ्यो । उनैसित सम्वन्ध राखेर रविजीले सन्तानसमेत जन्माएको सुन्दा म त छाँगाबाट खसे झैं भइहालेँ । छाती भत्भती पोल्न थाल्यो । मैले यो कुरा आमालाई बाहेक अरु कसैलाई सुनाउन सकिनँ । छोरीहरु लिएर केही दिनपछि अमेरिका फर्किएँ ।
यसरी हाम्रो सम्वन्ध भयंकर जटिलताको भूमरीभित्र फँस्यो । मसँगै बस्न मन नलागेर हो वा नेपालमै केही गरौं भन्ने मनसायले हो, वा दुवै कारणले हो, रविजी अमेरिका छोडेर नेपाल जानुभयो ।
निजी जीवनका विषयहरु पर्दाफास गरेर उहाँको करिअर सिध्याइदिन उक्साउनेहरु धेरै थिए । तर, अहँ मलाई मन लागेन । फेसबुकमा समेत आफ्नो निजी जीवनका बारेमा केही लेखिनँ । उहाँको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति नै नाम थियो । त्यही नामलाई बदनाम बनादिएर आखिर मैले के पाउँथेँ र ? यही सोचेर चुपचाप बसेँ ।
तर, छोरीहरुले निकै प्रेसर गर्न थाले । आखिर उनीहरु पनि हाम्रो निरन्तरको कलहबाट आजित भइसकेका थिए । ‘सम्पत्ति लिएर अलग-अलग बस्नुस, आ-आफ्नो गरी खानुस, कतिञ्जेल यसरी तनाव बोकेर बस्ने ?’ जेठी छोरीले भनिन् । कान्छी छोरीको पनि उस्तै भाव थियो । तपाईंहरुको झगडाले हामीलाई असर गर्छ भन्थे ।
त्यसैले अन्ततः मैले मुटुमा ढुंगा राखेर डिभोर्स पेपरमा साइन गर्ने निर्णय लिएँ र नेपाल आएँ । नेपालमा पनि रविजी मसित प्रत्यक्ष कुरा गर्नै नचाहने । आफ्नोतर्फबाट अख्तियारनामा दिएर एक व्यक्ति भिडाउनुभएको थियो । उसैसँग मैले डिल गर्नुपथ्र्यो ।
नेपालमा श्रीमानले पनि सम्वन्धविच्छेदको मुद्दा दिन पाउने व्यवस्था भदौ १ बाट लागू भएको रहेछ । त्यसको ३/४ दिनमै उहाँले डिभोर्सको मुद्दा दायर गरिसक्नु भएकोरहेछ । मैले नेपाल आएर फेरि पनि अन्तिम प्रयास गरेँ मिल्नका लागि । तर, उहाँ भेट्नै नआउने । मैले पनि उहाँको एजेन्टमार्फत खबर पठाइदिएँ कि नभेट्ने हो भने बहुविवाहको मुद्दा लगाएर जेल पठाइदिन सक्छु ।
धम्कीमात्रै दिएकी थिएँ । मुद्दा लगाउने सोच त थिएन । तर, यसले काम गर्‍यो । उहाँ बल्ल भेट्न आउनुभयो । मैले भनेँ, ‘अझै पनि केही बिग्रेको छैन, पुराना कुरा भुलेर नयाँ जीवन अघि बढाउँ ।’ उहाँले ठाडै नकार्नुभयो । ‘म मिल्ने कुरा गर्न आएको होइन । बरु सम्पत्ति, पैसा के-कति चाहिन्छ, भन’ भन्नुभयो ।
यति थाहा पाइसकेपछि अब मैले उहाँसित थप किचकिच गरिरहनुको अर्थ भएन । अन्ततः मैले मंसिर ९ गते डिभोर्स पेपरमा साइन गरेँ । मंसिर ११ गते हाम्रो विवाहको २५ औं अर्थात् सिल्भर एनिभर्सरी थियो । त्यसको दुई दिनअगाडि उहाँले मलाई डिभोर्स पेपर हातमा थमाइदिनुभयो । ‘एनिभर्सरी गिफ्ट’ मानेर त्यसलाई स्वीकारेँ । त्यस रात म खुबै रोएँ ।
मैले उहाँलाई त्यतिबेला भनेकी थिएँ, ‘दुई दिन पर्ख न त, एनिभर्सरीकै दिन डिभोर्स गरौं । तिम्रो नाममा अर्को रेकर्ड पनि हुन्छ । ’तर, उहाँको हतार उहाँलाई नै थाहा थियो । भावनात्मकरुपमा वर्षौंदेखि एक्ली थिएँ, अब कानूनी रुपमा पनि एक्ली भएकी छु । छोरीहरुप्रतिको जिम्मेवारी बाँकी छ । उनीहरुको आर्थिक दायित्व रविजीले लिनुभएको छ । तर, अभिभावकत्व त मैले नै दिनु छ ।
कागजीरुपमा डिभोर्स गरे पनि रविजीलाई मैले आफ्नो मनबाट निकाल्न सक्दिनँ । कहिल्यै निकाल्ने पनि छैन । म मरेपछि मात्रै उहाँलाई बिर्सिन सक्छु । मैले डिभोर्स गरेलगत्तै रविजी र छोरीका नाममा ‘आर थ्री र लभ साइन’ लेखिएको ट्याटु खोपाएँ । यो ट्याटुले मलाई सदा उहाँको अनुभूति गराइरहनेछ ।
जहाँसम्म मेरो जीवनको सवाल छ, त्यसबारे केही निर्णय लिएको छैन । तिमी पनि अर्को बिहे गर न भन्नेहरु धेरै छन् । मैले माथि पनि भनेँ कि डिभोर्स गरेका पुरुषलाई अर्को घर बसाउन जति सजिलो छ, महिलालाई छैन । त्यसमाथि यति ठूलो चोटबाट निस्कन मलाई समय लाग्छ । भविश्य त कसले देखेको छ र होइन ?”